Isbaheysiga Yeman oo sheegay in ku dhawad 200 oo ka mid ah Xuutiyiinta lagu dilay weerarro ka dhacay dalkaas. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Isbaheysiga Yeman oo sheegay in ku dhawad 200 oo ka mid ah Xuutiyiinta lagu dilay weerarro ka dhacay dalkaas.
Ilo-wareedyo gudaha Yeman ah ayaa sheegaya in Maleeshiyaad badan oo u dagaalamaya Xuutiyiinta la dilay, Iyadoo sidokale Ciidamada Isbaheysiga ay burburiyeen Taangiyo iyo tiro kamid ah gaadiid dagaal oo ay wateen Xuutiyiinta.
Isbaheysiga Yeman oo sheegay in ku dhawad 200 oo ka mid ah Xuutiyiinta lagu dilay weerarro ka dhacay dalkaas. was last modified: November 14th, 2021 by Admin
AMISOM Oo Ka Hadashay Ciidamo U Dhashay Dalka Uganda Oo La Xukumay
Dhageyso:-Gudoomi Ku xigeenka degamada baydhabo oo aanu layeelanay Wareysi ayaa ka warbixiinaayey sababta keentay